Pasternak | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | February 2020
Ihe niile ị ga-achọ ịma maka ịkọ parsnip na-eto eto na mkpụrụ dị n'ọhịa
N'etiti ndị ọrụ ubi, e nwere echiche na-eto eto parsnip si osisi dị nnọọ mfe. Na ihe nile n'ihi na o nwere obere mkpụrụ germination - ọ bụghị ihe karịrị 50%. Ekwenyere na njirimara a nyere ya nnukwu ọdịnaya nke mmanụ dị oké mkpa. Na mgbakwunye, ha nwere ike ịchekwa ihe karịrị otu afọ. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị maara njirimara ndị a ma rube isi na teknụzụ ugbo, ị nwere ike nweta nsonaazụ ndị a tụrụ anya ya.
Nri owuwe ihe ubi parsnip maka oyi
Dịka ọtụtụ osisi ndị ọzọ, parsnip adịlarị ama ama maka uru ọ bara na ọbụna ọgwụgwọ. Nke a dugara n'ọtụtụ ụzọ nke nkwadebe ya. Ntụziaka Parsnip ga-enwe mmasị karịsịa nye ndị na-arịa ọrịa obi, arịa ọbara na akụkụ nke usoro digestive. Tụkwasị na nke ahụ, osisi ahụ a kapịrị ọnụ na-arụ ọrụ dị ka diuretic na ọ bụ onye nnyemaaka mbụ maka colic, ụfọdụ ndị na-ejikwa ya eme ihe ọbụna igbochi ncha.
Pasternak akwukwo nri: bara uru Njirimara na contraindications
Pasternak bụ otu n'ime akwụkwọ nri ndị a ma ama na mpaghara anyị. Nke a na akwukwo nri a na-kọwaa na Umbrella ezinụlọ. Ọnụ ọgụgụ ya dị oke ezu na, yana ihe dị iche iche nke àgwà bara uru, na-eme ka parsnip dị oke mkpa maka ọtụtụ akụkụ nke ndụ mmadụ: nri na-edozi ahụ, ọgwụ nkà mmụta ọgwụ ochie na nkà mmụta ọdịnala, cosmetology.
Nzọụkwụ site nzọụkwụ ntụziaka banyere otu esi esi mee ka ebe obibi akwụkwọ ntuzi. Kedu ihe ọzọ dị na ebee ka m nwere ike ịzụta?
Atụmatụ maka violets: eto eto na ụlọ
"Levamisole": otu esi emetụta anụmanụ